एमसीसीबारे सरकारको प्रश्न र अमेरिकाको जवाफ (पूर्ण पाठसहित) - निष्पक्षखबर
काठमाडौंः अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको बताएको छ । साथै उसले २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने समेत प्रष्ट पारेको छ ।
नेपाली समाज एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । न संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको छ, न सम्झौता संशोधनका लागि अमेरिका तयार छ । लामो समयदेखि अनिर्णित बनेपछि अमेरिकाले एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न दबाव बढाएको छ । एमसीसी परियोजनाबारे बुझ्न भन्दै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमर नेपाल आउने तय भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुबारे प्रष्ट पार्न माग गरेको थियो ।
मन्त्रालयले इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन ? नेपालको संविधान माथि रहन्छ कि रहन्न ? बौद्धिक सम्पत्ति को सँग रहन्छ जस्ता ११ वटा प्रश्न र १७ सहायक प्रश्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, अमेरिकालाई पठाएको थियो ।
बुधबार त्यसको जवाफ दिएको एमसीसीले यस परियोजना सैन्य प्रयोजका लागि नभएको उल्लेख गरेको छ । इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने नेपालको प्रश्नमा एमसीसीले भनेका छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरु एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द प्रशान्त रणनीति भन्दा धेरै अघि देखिको हो ।’
एमसीसी लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ती अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको भन्दै उसले भनेको छ, ‘यस कानुनी बन्देजका बारेमा कप्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।’
इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने एमसीसीले बताएको छ ।
कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति कटिवद्ध देशहरुको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्युनीकरणमा केन्दि्रत रहने गरी एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना भएको भन्दै एमसीसीले यो कुनै सैन्य रणनीति नभएको दोहोर्‍याएको छ । ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिसा नै हो’ जवाफमा भनिएको छ ।
एमसीसीले कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण वौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्पामित्व रहने पनि बताएको छ । ‘यस्तो वौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्व र हक हुँदैन’ जवाफमा भनिएको छ ।
त्यस्तै एमसीसीको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालय गर्न सक्ने बताएको छ । ‘दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एमसीए नेपालको लेखा परीक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखा परीक्षण भइरहेको छ’ जवाफमा भनिएको छ ।
एमसीसीले परियोजना कार्यान्वयन भइसकेपछि नेपालले ३० दिनको सूचना दिएर एकपक्षीय रुपमा कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न सक्ने बताएको छ । ‘सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकरका तर्फबाट एमसीसी दुबैसँग एकपक्षीय रुपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्तर्गत सक्ने अधिकार छ’ एमसीसीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
एमसीसीले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको संविधान भन्दा माथि नरहेको पनि बताएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन ढिलाइ नहोस् भनेर कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह बनाएको भन्दै एमसीसीले संविधान भन्दा माथि नहुने उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसीले यो कम्प्याक्ट संशोधन भने गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । तर कम्प्याक्टको अनुसूचीमा रहेका केही विषय परिमार्जन गर्न भने सकिने उल्लेख छ । ‘कम्प्याक्टको दफा ६.२ (ख) ले सीमित परिस्थितिहरुमा कम्प्याक्टको अनुसूचीका केही पक्षहरु आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जुन कुरा परियोजनाका बदलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थिति प्रतिबिम्बित गर्न समय समयमा आवश्यक पर्न सक्छ’ एमसीसीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
एमसीसीले यो परिमार्जनलाई संशोधन भन्न नमिल्ने र त्यसलाई संसदीय अनुमोदन पनि आवश्यक नपर्ने बताएको छ ।
एमसीसीको जवाफः निसन्देह, परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सधैँ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहन्छ । नेपाल सरकार वा एमसीसी जुन वित्तिय स्रोतबाट प्राप्त भएपनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहन्छ । एमसीसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसीसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व रहँदैन । अनलाइन खबरबाट